Most Fun Science Festival Turkey kwakaita aiva 150 zviuru vanhu - RayHaber
mushaTURKEYCentral Anatolia Region42 KonyaTurkey zvaJehovha Most Fun Science Festival 150 Thousand Kushanya
Turkey zvaJehovha Most Fun Science Festival 150 Thousand Kushanya
08 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 42 Konya, Central Anatolia Region, GENERAL, HIGHWAY, musoro wenyaya, TURKEY 0
mutambo vakawanda kunakidza sayenzi akashanyirwa zviuru turkiyenin
7 yakarongedzwa muKonya Science Center ine dingindira re "Sei To, How Rinoshanda yıl. Konya Science Festival yakashanyirwa nevanhu zviuru zana nemakumi mashanu.
Konya Metropolitan Municipality basa ne TUBITAK akatsigira rokutanga sayenzi centre Turkey chakaitirwa muna Konya, vakawanda zvemafaro chikuru sainzi mutambo Turkey Science Center kuti Anatolia yaMwari 7. Konya Science Festival yakagamuchira vanofarira vesaenzi veese mazera kubva Konya nemaguta akasiyana.
Mutambo wezuva re3, zuva rekupedzisira meya weKonya Metropolitan Municipality Ugur Ibrahim Altay, vana uye vechidiki vakaungana.
KUVAKA RAMANGWANA TURKEY HAISI nzira VANA Us hatina ushingi CHIDO
Mutungamiri Altay vakati vakauya ku Science Science kuzoshandisa musika unofara nevana vavo munharaunda ine hupenyu uye vakawedzera zvigadzirwa zvakawanda kumutambo uyu gore rino. Veko 'Attack' neherikoputa of Armed Unmanned Aerial Vehicle (SIH) sachigaro akati kuti mutambo akaratidza Altai, "Kutaura chokwadi, zvose ramangwana vana vedu, tinotarisira kupa ushingi kuvaka inoenda Turkey. Kune yedu 100 Booth, mukuru wedu we500 anoita zviitiko zvevana. Mutambo weSainzi mukana wakakura kwete kuna Konya chete, asiwo Aksaray, Karaman, Nigde, Ankara uye Eskisehir. Ndinovimba gore rinouya isu tichaenderera mberi nekuvandudza uye kuronga. Chinhu chinonyanya kukosha cheScience yedu Mutambo kuronga zviitiko uko vana varipo kwese kwese. Ndinovimba kuti vanhu vedu kubva mazera ese vanofara kukuonai muchibva pano ”.
RUDZIKI RWIKI RINOGADZIRA GORE RONYAYA
Mutungamiri Altay akataura kuti chikamu chekutora chikamu cheKonya Science Festival chakawedzera gore rega uye ndokuti, "Mwaka wadarika, 100 yakanga yapfuura chiuru chimwe." Gore rino tasvika zviuru zve150 nhamba. TEKNOFEST, iyo yaiitirwa muIstanbul, yakaitawo mupiro wakakura. Izvo zvakagadzira kufarira kukuru mumitambo yakadaro munyika yedu. Ndinovimba kuti ichazadzikiswa nekutora chikamu kwakakwirira kubva gore rinouya. "Ndinoda kutenda vese veKonyans nevatori vechikamu."
'ATAKI' Uye 'SİHA' KUTAMBUDZWA PAKUTI ISAYENSI FESTIVAL YEMUTA WOKUtanga
7. Konya Science Festival ndiyo yaive nhanho yefirsts gore rino. Yedu yekugadzira yekugadzirwa helikopta 'Atak' uye Armed Unmanned Aerial Vehicle (SİHA) yakaratidzirwowo kekutanga gore rino paMutambo weSainzi. Iyo yekurwisa helikopta uye SİHA yaive pakati penzvimbo dzakashanyirwa zvakanyanya nesainzi vanofarira kushanyira Science Science.
ISAYENSI YEMISANGANO YAKABATSIRA PA 100
PaKonya Science Festival, inoitika panzvimbo yakavhurika yemamita mazana mashanu emamirimita; Pamusoro pe6, zviitiko zvakawanda senge zviitiko zvesainzi, kuratidzwa kwesainzi, kukwikwidza, simulators, ndege, UAV uye 100B nzvimbo dzepuratidziro, nzvimbo inochengeterwa dhizaini yekuongorora, kuongorora nyeredzi, macoding workshop, musangano wemagetsi wedhizaina akarongwa. Vatori vechikamu vaive neruzivo rwekuita mushe muchirongwa chekuwanikwa kwesainzi.
Konya Science Centre Yakachengetwa 1 Million 225 Thousand Science Curiosities 06 / 01 / 2019 Konya Konya Metropolitan Municipality, Turkey kwakaita TUBITAK-Ichibatsirwa pfuma kutanga Science Center, uyewo 2018 aiva ainyanya iyi nesayenzi. 2018 yakagadzirirwa 310 vane zviuru mumazviitiko zvakawanda, uye kubvira pakatanga, 1 yakagadzira 225 zviuru zvemasayenzi masayenzi. wokutanga sainzi centre Turkey nemumwe mukuru mureza Konya Science Center, 2018 munyika uye vachiri mazana ezviuru vashanyi kubva mumaguta akasiyana kweTurkey, uyewo mumwe zviitiko zvinokosha dzesayenzi maiva ne Google. Konya Metropolitan Municipality Mayor usingagumbuswi neni Ibrahim Altay, Turkey kwakaita TUBITAK vakatsigira, unova wokutanga nesayenzi centre muna Konya Science Center chiumbwa chomufananidzo wenyika, ...
7. Konya Science Festival Ino Vhurira Masuo Avo Kune VaSainzi Vanopinda 05 / 10 / 2019 xnumx'inci Science Festival ari Konya, chokutanga centre Turkey kuti sayenzi rakatanga muna TUBITAK-Ichibatsirwa Konya Science Center. KONYA, YEMAHARA YEMSAYENSI MUDZIMA UYE KANESI Konya Metropolitan Meya Uğur İbrahim Altay, achitaura pakuvhura kwemutambo uyu nekubatikana kukuru, 7 yeKonya. yezana, sainzi yetsika, hunyanzvi uye tsika nevanhu yakayeuchidza kuti nzvimbo yesainzi. Mutungamiri Altay akataura kuti Konya ichiri nzvimbo yesainzi neindasitiri yayo, kuyunivhesiti uye nezvekurima. 12 Tine 100 zviuru zvemamita mativi munzvimbo mune chiuru mamaira emamaki nzvimbo. Isu tinoronga zviitiko zvakasiyana siyana mu26 yedu hombe yekuratidzira. Muchokwadi, neMutambo weSainzi…
Erciyes Ski Center 60 zviuru zvevanhu vakashanyira 14 / 01 / 2015 Erciyes Ski Centre yakashanyirwa nevanhu vane zviuru zve60: Erciyes, iyo yakava nzvimbo yekushanyirwa kwechando kumativi ose enyika nekutsvaga kweKayseri Metropolitan Municipality, yakasviba pamusoro pevhiki. Nhamba dzevaya vakapedza Mugovera neSvondo muErciyes dzakabudiswa. 60 zviuru zvevanhu vakasvika kuchikwata chechikepe. Erciyes Winter Tourism Centre yakasimwa muMetropolitan Town yakatanga kutakura michero. Makumi ezviuru zvevanhu vanobva Kayseri neKayseri vakapedza vhiki yeElciyes. Maererano nedzimwe nyaya dzeErciyes AŞ, pakupera kwesvondo, zvivako zvinoshandiswa zvinoshandiswa nekushandisa 17 vanhu vane zviuru zvekufadzwa nekupembera pamasasa ematope ematambudziko akasiyana. Skiing uye sledding kız
Olympos Teleferik uye Tahtali Mountain yakashanyira 208 vanhu vane zviuru 16 / 10 / 2014 Olympos Teleferik uye Tahtali Mountain yakashanyirwa ne208 vanhu vane zviuru: Tahtali Mountain, iyo inonzi 2365 mita yakakwirira muKemer District yeAntalya, yakazara nevashanyi. Mumwedzi wekutanga we9 wegore rino, Olympos Teleferik neTahtali Mountain zvakashanyira nevanhu 208 zviuru. Yakatangwa mu2007 muTahtali Mountain, Olympos Teleferik iri kutenderera kunharaunda iyo vatorwa vekugara uye vekunze vane mukana wekufamba kubva kugungwa kuenda kudenga. Mukuru Mukuru weOlogios Teleferik Haydar Gümrükçü, 9 mukutanga 208 gore rino, vanhu vane chiuru vakashanyira nzvimbo yacho, akadaro. Pakupera kwegore rino, 230 yakataura kuti inoda kusvika kuvanhu vane chiuru uye Haydar Gümrükçü vakati, X
Mirairo mikuru inoshandura kushaiwa basa, 150 zviuru zvevanhu vanodya chingwa 30 / 12 / 2014 Mishonga yakakura yakapora basa, 150 inodya vanhu vane chiuru: 40 vanhu vane zviuru vanoshanda mumapurogiramu zana ekufambisa kunze kwechitatu Third Airport uye Yavuz Sultan Selim Bridge. Mamiriyoni emapurojekiti anotarisa nehuwandu hwavo hwemari pamwe chete nehuwandu hwevashandi vave rakava suo retariro kwezviuru zvevanhu, kubva kuvashandi kusvika kune masters, vavaki vezvivako uye vanjiniya. Just 3. 30 vanhu vane zviuru vanopedza nguva yakawanda pakugadzira ndege. Nhamba yevanhu vose ndeye 40 chikamu. Imwe yemishonga yakakura, 150, iri kudya vanhu vane chiuru kana ichiverengwa nemhuri dzavo. Kubva kuIzmir kusvika kuKars X XUMUMX chikamu muboka iro rakasimudza Yavuz Sultan Selim Bridge, yechitatu yehuro yeBhophorus bin
IMBB 'Tourism Signs' Chikumbiro chekuvandudza Tourism
Konya Science Centre Yakachengetwa 1 Million 225 Thousand Science Curiosities
7. Konya Science Festival Ino Vhurira Masuo Avo Kune VaSainzi Vanopinda
Erciyes Ski Center 60 zviuru zvevanhu vakashanyira
Olympos Teleferik uye Tahtali Mountain yakashanyira 208 vanhu vane zviuru
Mirairo mikuru inoshandura kushaiwa basa, 150 zviuru zvevanhu vanodya chingwa
3. 150 vanhu vane zviuru vachaenda kune imwe ndege
6 Mwedzi we376 Zviuru zve288 Vanhu 2 Mamiriyoni akapfuura nemuKocaeli terminal
Erciyes Ski Resort Yakashanyira 400 nevanhu mu Semester